I-Thailand ilungiselela ukuvula iVenkile yayo yokuqala ye-Apple | Ndisuka mac
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba iThailand iya kuba lilizwe elilandelayo apho iApple ivula iVenkile entsha yeApple, enokuba linani lama-500 kwihlabathi. Abafana abavela eCupertino bathumele kwiwebhusayithi yabo, kwicandelo lemisebenzi, uluhlu lwemisebenzi ekhangelwa yinkampani eBangkok, ikomkhulu laseThailand, elinokubonisa ukuba iApple ingavula iVenkile yokuqala yeApple kweli lizwe.
Okwangoku eThailand kukho abathengisi abagunyazisiweyo abangaphezulu kwe-100 abathengisa iimveliso ze-Apple kwikomkhulu, ikomkhulu elinalo Abemi abasondele kwizigidi ezisi-8, ngaphezulu kwenani labemi elaneleyo lokuvula iVenkile entsha yeApple.
Uninzi lwabathengisi abagunyazisiweyo abafumanekayo kwikomkhulu balawulwa ngabasebenzi beApple, ke uluhlu lwemisebenzi ethe yathunyelwa yinkampani kwiwebhusayithi yelizwe layo inokubonisa ukuvulwa kwamaziko amatsha okuthengisa olu hlobo, nangona linenani elikhulu elikhoyo ngoku akunakulindeleka. Inkqubo yokuqesha abasebenzi beVenkile yeApple yinkqubo yokugqibela ekufuneka yenziwe, ke ukuba le misebenzi ivenkile yeApple ekugqibeleni, ukuvulwa akunakulibaziseka ixesha elide.
Kule minyaka idlulileyo, ngenxa yenxalenye yokunyuka kwenani labemi, imfuno yeemveliso zeApple inyuke kakhulu, kungoko kukho ngaphezulu kweendawo zokuhambisa ezili-100 kwikomkhulu nakwinxalenye yelizwe. Ngaphandle kokugqibela kokuqinisekisa leVenkile intsha ye-Apple kwaye ukuba ayithathi xesha lide, Le isenokuba yiVenkile ye-Apple yama-500 evulwa ngu-Apple kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Thailand ilungiselela ukuvula iVenkile yayo yokuqala ye-Apple